17 Zvino ungano yose yevanakomana vaIsraeri yakabva kurenje reSini+ vachiti vakafamba vombomira, sezvavakanga varayirwa naJehovha,+ vakadzika musasa paRefidhimu.+ Asi pakanga pasina mvura yokuti vanhu vanwe. 2 Vanhu vakapopotera Mosesi vachiti:+ “Tipe mvura tinwe.” Asi Mosesi akati kwavari: “Nei muri kundipopotera? Munorambirei muchiedza Jehovha?”+ 3 Vanhu vakava nenyota ipapo, vanhu vakaramba vachigunun’unira Mosesi vachiti: “Wakatibudisirei muIjipiti kuti utiuraye nenyota isu nevanakomana vedu nezvipfuwo zvedu?”+ 4 Mosesi akazochemera Jehovha, achiti: “Ndoita sei nevanhu ava? Munguva pfupi vachanditema nematombo!”+ 5 Jehovha akabva ati kuna Mosesi: “Enda pamberi pevanhu+ utore vamwe varume vakuru vaIsraeri netsvimbo yako yawakarova nayo Rwizi rwaNire.+ Ibate muruoko rwako urambe uchifamba. 6 Tarira! Ndichange ndakamira pamberi pako ipapo padombo riri paHorebhi. Urove dombo racho, uye mvura ichabuda mariri, vanhu vachainwa.”+ Mosesi akazoita saizvozvo varume vakuru vaIsraeri vakatarira. 7 Naizvozvo akatumidza nzvimbo yacho kuti Masa+ uye Meribha,+ nemhosva yokupopota kwevanakomana vaIsraeri, uye nokuedza kwavo Jehovha,+ vachiti: “Jehovha ari pakati pedu here kana kuti kwete?”+ 8 Zvino vaAmareki+ vakauya, vakarwisa Israeri muRefidhimu.+ 9 Mosesi akati kuna Joshua:+ “Tisarudzire varume, muende,+ munorwisa vaAmareki. Mangwana ini ndichamira pamusoro pechikomo, ndakabata tsvimbo yaMwari wechokwadi muruoko rwangu.”+ 10 Joshua akabva aita zvaakanga audzwa naMosesi,+ kuti arwise vaAmareki; uye Mosesi, Aroni naHeri+ vakakwira pamusoro pechikomo chacho. 11 Zvino Mosesi paaingosimudza ruoko rwake, vaIsraeri vaikunda;+ asi paaingodzikisa ruoko rwake, vaAmareki vaikunda. 12 Maoko aMosesi paakanga aremerwa, vakatora dombo, vakariisa pasi pake, akagara pamusoro paro; Aroni naHeri vakatsigira maoko ake, mumwe ari kurutivi urwu uye mumwe wacho kurutivi urwo, zvokuti maoko ake akaramba akatsiga kusvikira zuva ravira. 13 Nokudaro Joshua akakunda Amareki nevamwe vavo achishandisa muromo webakatwa.+ 14 Zvino Jehovha akati kuna Mosesi: “Nyora izvi mubhuku kuti zvive chiyeuchidzo,+ uzvitaure Joshua achinzwa, ‘Ndichaita kuti Amareki asayeukwa zvachose pasi pematenga.’”+ 15 Mosesi akabva avaka atari, akaitumidza kuti Jehovha-nisi, 16 achiti: “Nokuti ruoko runorwisana nechigaro choumambo+ chaJah,+ Jehovha acharwa naAmareki kwezvizvarwa nezvizvarwa.”+